Archive du 20190122
Loza voajanahary Dibo-drano any Antsiranana
Nihotsaka ny tany teto Antananarivo ary namoizana ain’olona am-polony mahery sy traboina dimampolo mahery tetsy Andohalo sy Tsimbazaza vokatry ny ora-mikija nateraky ny oram-be.
Resaka « laïcité » Fototr’olana mety hanakorontana ny firenena
Hatramin’izao dia mbola miteraka resabe foana ny mikasika ny tsy fifangaroan’ny fivavahana sy fitantanan-draharaham-panjakana na ny « laïcité de l’Etat » , hoy ny CRN.
Vina IEM Tsy hilamina raha tsy vita ny fampihavanana, hoy ny CRN
Nisaotra ireo filoham-pirenena Malagasy teo aloha sy ny vadin’Itompokolahy Zafy Albert ny filohan’ny komitin’ny fampihavanam-pirenena na CRN, Tabera Randriamanantsoa.
Imbiky Herilaza “Manan-jo hivondrona ny mpitarika ho mpanohitra”
Nanomboka nandray ny asany amin`izay ny filoham-pirenena vaovao ary miandry ny fanovana izay heveriny fa mety ho an`ny firenena.
Avarapianarana malagasy Manomboka manao pimaso an’i Andry Rajoelina
Nanao pimaso amin’ny filoham-pirenena vaovao Andry Rajoelina omaly ry zareo avarapianarana mivondrona eo anivon’ny fikambanana Mafami.
Ntsay Christian Praiminisitra hanaramaso an-dRajoelina
Voatendry ho praiminisitra hitantana ny governemanta amin’izao fanjakana Rajoelina, filoha faharoan’ny Repobilika faha-4 izao ny praiminisitra teo aloha Ntsay Christian, taorian’ny filankevitry ny minisitra manokana natao teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha omaly takariva.
Fampanofinofisan-dRajoelina Dodona tsy mahandry 5 taona ny vahoaka
Manomboka ny fotoana hahafahan’ny filoha vaovao Andry Rajoelina manatanteraka ny fampanofinofisana nakana ny fom-bahoaka.
Governemanta vaovao Homena sehatra kokoa ny olon’ny 2009…
Voafaritra ao anatin’ny boky IEM fa miisa 21 na 22 eo miaraka amin’ny praiminisitra ireo mpikamban’ny governemanta.
Jeopolitika frantsay Mametraka ny olony amin`ireo firenena zanatany fahiny
Taorian`ny fianianan`ny filoham-pirenena vaovao ny sabotsy lasa teo, dia nitafa fohy tamin`ny mpanao gazety ny iraky ny filoham-pirenena frantsay, Jean Baptiste Lemoyne, izay nilaza fa hampitombo ny tetibola ampiasain`ny firenena Malagasy amin`ny lafiny fampandrosoana.
Fitsinjaram-pahefana tena izy Finiavana ara-politika no tsy misy
Tsy tokony ho olana ny fanatanterahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy saingy olana ny tsy fisian’ny finiavana ara-politika, hoy ny mpahay lalàna Dokotera Razaranaina Nome.
Edito Naniry zaza ka tera-dahy !
Io ary ilay nandrasana. Naniry zaza isika Malagasy ankehitriny ka tera-dahy.
Anosizato Andrefana Lavaka be iray mahatonga amboteiazy
Henjana raha samy fitohanan’ny fiara eto Antananarivo Renivohitra ny eny Anosizato. Maro no antony.
Bakalorea 2019 Haroso ny 30 septambra hatramin’ny 4 oktobra
Haroso ny 30 septambra ka hatramin’ny 4 oktobra ho avy izao ny fanadinam-panjakana bakalôrea amin’ity taona 2019 ity saingy mbola hiandrasana fankatoavana ny didim-pitondrana izany.
Fanohizana fianarana any ivelany Firenena maro no vonona handray ireo mpianatra Malagasy
Samy maniry ny handeha hanohy fianarana any ivelany avokoa ny ankamaroan’ireo tanora Malagasy manana ny maripahaizana Bakalôrea.
Trano Printy FLM Miantso ny fanjakana hanamora ny fampidirana ny akora fototra
Nilaza ny tale jeneralin’ny Trano Printy Fiangonana Loterana Malagasy (TPFLM), Pasitera Lahivelo Jean Donné fa tena lafo ny vidin’ny taratasy avy amin’ireo mpamatsy eto an-toerana noho ny fandoavan’ireo hetra ambony be amin’ny fanjakana.
Fikambanan’ny Zanak’Alaotra Nanolotra ny vina fampandrosoana ny faritra
Tahaka ireo faritra maro samihafa izay nampatsiahy ny vina IEM sy ny veliranon’ny filoham-pirenena vaovao dia nanatanteraka ny fanambarany ihany koa ny fikambanan’ny zanak’Alaotra.
VOATAFIKA NY DZAMA
Nisy nanafika ny mpiasan’ny orinasa Dzama handeha hanatitra vola eny amin’ny banky
Mbola mampametra-panontaniana ny maro hatramin’izao ny loharanom-bola nividianana ilay fiara raitran’ny filoham-pirenena Malagasy, Andry Rajoelina.
Fihotsahan’ny tany eny Tsimialonjafy Efa tamin’ny taon-dasa no nisy fampitandremana
Efa tamin’ny taon-dasa no nampitandremana sy nalana tamin’ny toerany ireo olona nianjeran’ny trano teny Tsimialonjafy, Ambanin’Ampamarinana, raha araka ny fanazavan-dRakotomalala André,
3 mianaka tototry ny tany Anio ny fandevenana
Halevina anio talata 22 janoary izy telo mianaka indray maty namoy ny ainy vokatry ny fianjeran’ny hazo sy ny fihotsahan’ny tany tamin’ny sabotsy alina lasa teo teny Tsimialonjafy Ambanin’Ampamarinana.
Lalao Ravalomanana Nampahery ireo fianakaviana tra-pahoriana
Noho ny voina nahazo ny fianakaviana nihotsahan’ny tany teny Andoharano Tsimbazaza Boriborintany faha-4 ny takarivan’ny sabotsy ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA)